Nagu saabsan - Study Abroad Nations
Study Abroad Nations waa blog caalami ah oo loogu talagalay hagista ardayda doonaya inay wax ku bartaan dibadda ama xitaa gudaha gudaha jaamacadaha iyo kulliyadaha wanaagsan, iyo sidoo kale inay u soo bandhigaan kun iyo hal fursado iyo barnaamijyo waxbarasho oo ku baahsan internetka oo dhan.
Waxaan u dirnaa cusbooneysiin maalinle ah dhammaan macaamiisheena firfircoon si aan ula socodsiino barnaamijyada ugu dambeeyay ee deeqaha waxbarasho ee loo heli karo iyaga iyo hagitaanno ku saabsan sida ay u dalban karaan deeqdan waxbarasho ee leh xiriiriyeyaasha codsiyada.
Waxaan u dirnaa Tilmaamaha Dibadda ee akhristayaasha si aan ugu hagno iyaga socodka. Waxaan kuu diyaarinay oo kuu diyaarinay Daraasada Dibedda xitaa ka hor intaadan helin fursad sidaas darteed marka ay fursadu u timaado ugu dambeyn kuma wareersan doontid sida arrimaha looga socdo.
Waxaan maanka ku haynaa ardayga, waxaan u maleyneynaa in dantaada marka hore!